↑ 福建省2009年国民经济和社会发展统计公报။ 中国统计信息网။ 22 February 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Retrieved 2010-05-01
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Forestry in Fujian Province။3May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 23 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fujian Government Website (PRC) Archived7May 2005 at the Wayback Machine.
Fujian Provincial Government (ROC) Archived 14 June 2006 at the Wayback Machine.
ကျိက်ဒေးယျုံ ဆံတော်ရှင် တည်ရှိသည်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖူကျန့်ပြည်နယ်&oldid=640001" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။